Ukuqwalaselwa kwe-DevTeam yeFimware 3.1.3 Jailbreak, kwi-iPhone nakwi-iPod Touch | IPhone iindaba
Ukuqwalaselwa kwe-DevTeam yeFimware 3.1.3 Jailbreak kwi-iPhone nakwi-iPod Touch
iberllin | | Ihlaziywe 31/01/2019 10:46 | iPhone, Jailbreak
NgoLwesibini odlulileyo, iApple ikhuphe ifayile ye- Inguqulelo entsha ye-firmware ye-iPhone kunye ne-iPod Touch, 3.1.3.
Ukujongana nale meko, abasebenzisi abaninzi bafuna iJailbreak izixhobo zabo, kodwa .., Ngaba kufanelekile okanye akufuneki beJailbreak?.
Nazi izinto eziqwalaselwa yi-DevTeam:
"Ityala lePwnage 3.1.5 ephume izolo ngeCawa, iyakuvumela Jailbreak ngokukhuselekileyo kunye nokuvula nge-Ultrasn0w kwizixhobo ezine I-basebend ingaphantsi kwe-05.11.07".
Isixhobo sePwnage 3.1.5
“Kodwa ukuba unaso isixhobo esinefayile ye- I-Baseband 05.11.07 kunye neBlacksn0w yasetyenziswa, kufuneka hlala kunye neFirmware 3.1.2".
"Ngokubanzi ivuliwe iPhones 3G kunye 3G, Bamele ukuba Unonophelo olukhulu, kuba ukuba wenze impazamo, unokugqibela ngokuhlaziya kwi-Firmware esemthethweni 3.1.3 kwaye ke ulahlekelwe kukhutshwa kwesixhobo, kunokwenzeka ngonaphakade".
"Bonke abasebenzisi be - I-iPhone 3Gs, Kuya kufuneka uhlale kude nolu hlaziyo, Zombini ngesi sixhobo kunye nezinye zangoku, Ngaphandle kokuba ifayile igcinwe "Shsh" kuhamba Cydia, kuba ukuba akufani nokuba baya kunyanzelwa ukuba bahlaziye kwiFirmware esemthethweni 3.1.3, ngaphandle kokukwazi ukuhla baye ku-3.1.2 kwaye balahlekelwe lithuba lokuvula ngokungapheliyo ".
"Ukuba emva kokufunda ngentla, uhlangabezana neemeko zokuhlaziya, kuya kwenziwa iFirmware yesiqhelo yenguqulo 3.1.3 ukuze ukwazi ukubuyisela I-iPhone 2G, i-iPhone 3G, i-iPhone 3Gs ene-iBoot yakudala, i-iPod Touch 1G, kunye ne-iPod Touch 2G ene-iBoot yakudala«.
«Ukuba awuyazi ukuba unayo iBoot yakudala, kuya kufuneka thintela uhlaziyo kude kufundwe okungakumbi".
Kufuneka wenze ukuba iJailbreak yenziwe ngePwnagTool, ngaphambili, ukuba unayo I-iPod Touch 2G kunye neBoot yakudala kwaye kwimeko enjalo kuyakhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa reds0 0.9.4.
redsnow 0.9.4 Mac - redsn0w 0.9.4 Windows
“Ukuba kwelinye icala une I-iPod Touch 1G, i-iPhone 2G, okanye i-iPhone 3G y akukho kuvulwa okuyimfunekoKuya kufuneka usebenzise ifayile ye- redsn0w, kodwa inguqulelo 0.9.3, kuba iyakhawuleza kwaye awuzukuya kwinkqubo yokubuyisela epheleleyo. Into ekufuneka uyenzile kukuhlaziya kwaye emva koko usebenzise i-redsn0w, ukhombe kwiFirmware 3.1.2, endaweni yeFirmware 3.1.3 ”.
redsnow 0.9.3 Mac - redsn0w 0.9.3 Windows
Msgstr "I - PwnageTool iya kusebenza ne I-iPhone 3Gs ukuba ngoku uku inguqulelo 3.1.2 okanye ukuhla ukuya ku-3.0”Kwaye iimeko ezichazwe apha ngasentla ziyafezekiswa.
Msgstr "Sukusebenzisa iPwnageTool kwi iPhone 3GS ukuba sele uhlaziye kwiFirmware 3.1.3, ukususela ayizukusebenza".
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ukuqwalaselwa kwe-DevTeam yeFimware 3.1.3 Jailbreak kwi-iPhone nakwi-iPod Touch
Izimvo ezi-182, shiya ezakho
Ndiyidlalile kwaye ndasilela nge-sn0wbreeze, kodwa iapile izolo isayine i-3.1.2
Senza ntoni thina sinetyala lokugqibela le-3G nge-basebad 5 kunye ne-iboot entsha? «" Sukusebenzisa iPwnageTool kwi-iPhone 3GS ukuba sele uyihlaziyile kwiFirmware 3.1.3, njengoko ingazukusebenza ". Ndifuna nje ukuvalela, isiphelo sendlela sisuka kwimovistar kwaye akukho mfuneko yokuba ndiyikhulule.
Ndine-3GS ene-iboot endala kwaye ndafaka i-firmware yesiko kunye ne-snowbreze jailbreack.Umbuzo wam kukuba ndiyikhuphe i-iPhone nge-blacksnow, ngoku ndingafaka ikhephu le-ultras ukuyikhupha okanye andikwazi?
awunakukhetha ukuya ejele
I-ultrasn0w isebenza kuphela ngePwnageTool kunye ne-Baseband engaphantsi kwe-05.11.07
Molo, ndinentsholongwane ye-ikee. kwaye ndazama ukuyibuyisela kwakhona ngefemu enye endandinayo, i-3.1.2 kodwa indinika impazamo. Ndenze ukubuyiselwa kwayo yonke into ukusuka kwi-iphone efanayo kukhetho kwaye ngoku ayindijiki.
Andazi ndithini !! Uncedo oluncinci nceda ...
Cofa amaqhosha ama-2 EKHAYA kunye NAMANDLA ngokudibeneyo kude kube kuvuliwe kwaye ubuyisele
Hayi, bona ukuba unganceda. Ndine-iphone 3g evela kwi-movistar, i-jailbreak kwaye ndiyisebenzisa nge-vodafone enkosi kwi-ultrasn0w. Inguqulelo ye-firmware iyi-3.0 kunye ne-baseband 4.26.08.
Ndifuna ukuyibuyisela kwaye ndibeke u-3.1.2 kodwa andazi ukuba ndenzeni, ukuba ndiyayidlulisa i-blackrain kunye ne-blacksnow okanye i-pwnage kunye ne-ultrasnow.
Ndiyifundile ukuba ibhetri ye-blackrain inde kuba ayibaleki ngasemva, ngaba yinyani? ngaphandle kwenzekani kwi-baseband? Ndicebisa ntoni? uluvo lwam luya kuba ne-firmware elula kwaye uyisebenzise i-cob vodafone, kwaye wandise ibhetri ethi i-3.0 ihlale incinci kakhulu.
Ndiyabulela kwangoko. kwaye sivuyisana nebhlog yeberllin. ukuzinikezela kunye nolwazi lukhulu
Ndine-3gs 3.1.2 ene-iboot entsha endinokuthi ndiyiphule
kwi-iPhone yam, okwangoku ene-blackra1n kwaye kufuneka ndiyisebenzise ngalo lonke ixesha ndiqala kwakhona i-iPhone
Mva kwemini, ndinamathandabuzo, ndihlaziye i-iphone 3g kwifemu entsha, 3.1.3, endiyilayishe i-baseband, andifuni ukuyikhulula okanye nantoni na, ndifuna ukufaka i-jailbreak, ukuba ndiyayikhuphela ifirm yesiko 3.1.3 kwaye iya kuphinda indishiye? okanye ukuba ngumqeqeshi weqonga eliphantsi lesiko, ngaba ayizukundivumela? Ndiyabulela kakhulu!
Unelungelo le-Baseband, ke UNGAZE ucinge ngoku:
-Akukho hlaziyo kwi-firmware esemthethweni
-Ukuba ungagqithisi iBlackra1n
-Ungagqithisi kuye Sn0wbreeze
Kuya kufuneka usebenzise kuphela:
- redsn0w 0.9.3 kunye neFirmware 3.1.2
Isixhobo se-Pwnage 3.1.5 esineFirmware3.1.2
- Okanye i-firmware engu-3.1.2 engayilayishisi i-baseband kwaye yenziwe ngePwnagweTool, ngolu hlobo:
Molo eBerlin ndihlaziye i-a3.13 kwi-iTunes ndinayo i-Antigua iboot endinokwenza ngayo i-jailb ngaphandle kokuyikhulula kuyo nayiphi na inkampani
Hlala unje njengoko uya kuphulukana nokuqhekeka kwejele.
I-iphone phantse ayinakuze iyenze ukuze uyiqale ngokutsha ...
kungenzeka ukuba angakuvumeli.
Kodwa zama ukwehlisa ukuya ku-3.1.2:
Molo, ndine-iPhone 3G ene-jailbreak 3.1.2 kunye ne-baseband 04.26.08
Ngaba kufuneka ndibambe i-jailberake kwi-3.1.3? Andinayo ukuba ikhutshwe kodwa kwixa elizayo ndingathanda ukuyithengisa ukuze ndithenge i-iPhone elandelayo ...
Ewe, ndicinga ukuba ayifanelanga ukucima kunye nokuhlaziya kunye neJailbreaking ... Kude kube kuhlaziywa okubalulekileyo okunje nge-3.2 okanye i-4.0 ngokuthe ngqo. Ndincamathela ku-3.1.2.
Wenza kakuhle, andazi ukuba kutheni abantu befuna ukunyuka ngaphandle kokunye ...
Ndine-iphone 2G ene-firmware 3.1.2 (isiko).
Ndingayihlaziya ibe ngu-3.1.3? Ndingayenza njani?
Ndenze impazamo yokuhlaziya ukuya ku-3.1.3, ngaba ndingenza into?
UBerllin enkosi kakhulu ngempendulo yakho ekhawulezileyo kunye nengcinga. Ndiyaqonda ukuba i-firmware ekhankanywe kwinqaku ngu-3.1.3 kodwa nge-baseband 4.26.8 kwaye ke iyakwandiswa kuthi kuthi sine-3g kunye ne-baseband. Uff obo bugwenxa, ke andiqondi ukuba kutheni besithi i-blackrain ingcono okanye i-baseband ayinyuki, ndizibona sendibhatala into yobudenge abayicelayo ukuyikhulula nge-imei hehe, nangayiphi na imeko enkosi evela
Imibuliso evela murcia
Molo ngokuhlwa okumnandi, ndine-3 Gs 32 gb, Simahla yemvelaphi, kunye nejele, kunye neBlackra1n Rc 3, kunye neFirmware 05/11/07, kunye ne-3.1.2, ukuza kuthi ga ngoku yonke into ihamba kakuhle ngaphandle kokudlula I-Blackra1n xa kunokwenzeka iphelelwe yibhetri, ngenxa ye-iboot entsha, kungcono ukuba uhambe ngalo lonke olu phuculo, akunjalo? kude kuphume into eza kulungisa iIboot.
Kwelinye icala, uyazi ukuba kukho into eyenzekayo namhlanje kwiphepha le-Appullo kuba ayidibanisi yonke imini,
Enkosi njengesiqhelo Jon.
Andibaqondi abantu, uBerllin udiniwe kukuthi uguqulelo 3.1.3 alunampucuko lubalulekileyo kwaye uqhubeke no-3.1.2 olunge kakhulu, ubuncinci ndine-3.1.2 kwaye andiyihlaziyi ngelize, kuba isebenza ngokugqibeleleyo kwaye andinayo ne-itunes ehlaziyiweyo endiqhubeka nayo ngenguqulelo efanayo hayi entsha. Nceda uqaphele ukuba oku kuyinyani kwaye kungcono kuwo wonke umntu ...
I-2G ijikeleze konke:
Hlala njengoko unjalo ukungaphatheki kakuhle onako kuncinci, ukuba uyakulawula
Ukuba uya phezulu awukwazi ukusebenzisa iBlackrain okanye i-jailbreak nge-iPhone yakho.
Andazi ukuba kwenzeka ntoni kwiphepha elinomdla.
Andiqondi nokuba, umnqweno wokunyuka xa uninzi lwazo lwalulungile ...
Ukuba bendiyi-Apple, bendiya kukhupha uhlaziyo veki nganye kwaye kwiinyanga ezi-2 i-jalbreak ibiya kuphela
Enkosi iberllin inye kuphela inqaku, ndiyicacisile, ndide ndibone into esombulula into eNtsundu kuthi…. Ndizolile ndinje.
Mholweni ngoku okuhle nonke kuJon.
Ulale kakuhle Jon ...
Noo ndifuna ukufa, ndithenge ii-3Gs nge-iboot entsha kwaye andinakuyenza
Enkosi kakhulu ngempendulo yakho ekhawulezileyo. Ndifuna ukukubuza omnye umbuzo. Kwifowuni yam engenayo iphone yiya ngqo kumatshini wokuphendula. Ngaba isoftware efakiweyo ebangela oku kum? Inkampani yeselfowuni iMovistar indixelele ukuba ukuhanjiswa kumatshini wokuphendula kuhlala kusebenze. Eminye isebenza kakuhle.
Ukususela sele enkosi kakhulu. !!!!
Molo, ndiyithengile into yesibini namhlanje, umfana othengise ngam ubeke inguqulelo yam yokugqibela kuyo kwaye ngoku i-baseband yam yeyoyikisayo 5.12.1. Ndiyaphule, kodwa ke, andinakho ukuyikhulula, akunjalo? Ngaba akukho ndlela yokunciphisa i-baseband? Enkosi!
Ndifana nabaninzi, ndibanjwe ndenyuka ndaya ku-3.1.3 kwaye emva kokuzama ukufaka kwakhona i-3.1.2 kunye ne-firmware yangokwezifiso, andazi ukuba kutheni ibuyiselwe nge-3.1.3 kunye ne-5.12.1 baseband. Siza kulinda izisombululo ezinokubakho kuba sele ndikhumbula ulungelelwaniso lwam lwangaphambili lwe-xD
indlela yokubonisa ukuhleka sitsho
Molo! Ndine-3gb iPhone 16G, kwaye bendifuna ukufaka i-blackrain, kwaye bandixelele ukuba ndihlaziye ngaphambi kokwenza i-jalibreack, kuba bendine-3.0.1
kwaye ngoku ndinayo i-baseband kunye ne-3.1.3
Into endiyifunayo kukufaka i-cydia.
Andifuni ukuyivula kuba ivela eMovistar kwaye yinkampani endiyisebenzisayo.
Ngaba i-jalibreak iyahambelana kwaye ifaka i-cydia kolu hlobo?
Ndinyanzelisa, akukho mfuneko yokuba ndikhulule.
Ukufunda kwiiforamu, andiqinisekanga, abanye bathetha izinto ezithile, abanye abanye .. Kwaye andazi ukuba ndenzeni ...
Ndiya kuluxabisa ngokwenene uncedo oluncinci!
Imibuliso evela eMallorca.
Molweni zihlobo, emva kokuhamba nganye nganye kwiiforamu zaseforamu zaseMelika ndafumanisa ukuba unokuzikhuphelela i-baseband. Iiyure ezili-10 kamva ngaphandle kokulala, ewe. Yenziwe nge-fuzzyband, ndiyenzile nje.
Kwaye ndiyifundile kulo msonto wale forum, ndenza nje. Ungayenza kuphela ukuba une-5.8 bootloader. Kodwa yiza ... into into!
Nayiphi na indlela yokuhla ukusuka ku-3.1.3 ukuya ku-3.1.2 ??
Ewe, nali ityala lam, ndingaqondanga ndenyuka ndaya ku-3.1.3 ngempazamo (ngempazamo okanye nge-bullshit ...) kodwa ndayihlaziya i-baseband (kwi-3GS). Emva kokuphanda kwi-intanethi, ndafumanisa ukuba ungathoba uye kwi-3.1.2 ukuba uzigcinile iifayile kwi-cydia (endiyenzileyo). Ndathobe ukulandela imiyalelo, kwaye ndahlala e-3.1.2 ngokuqhekeka kwejele kunye ne-baseband entsha. Njengoko ndingasenanto ilahlekileyo, ndizamile ukuvuselela ku-3.1.3 ngefirmware yesiko endiyenzileyo kwasekuqaleni ngeqhwa kunye ne…. voila, ndinayo i-3.1.3 kunye ne-baseband entsha kunye nejele, ewe, iphone yam isuka kwi-movistar kwaye akukho mfuneko yokuba ndiyikhulule. Ukuba ufuna ubungqina, ndingalayisha iifoto ...
UJoan ndizigcinile iifayile kwi-cydia, ndingahlisa njani?
Nasiphi na isifundo ???
Kulula kakhulu, andazi ukuba ungabeka ikhonkco kwezinye iiwebhusayithi, ukuba ayisiyiyo imeko leyo cima uluvo: http://crackeatuiphone.com/2010/02/tutorial-como-hacer-downgrade-del-iphone-3gs-con-firm-3-1-3/
1 kuya kufuneka uguqule ifayile yokubamba (c: \_ windows \_ system32 \_ driver \_ etc \_) kwaye ungeze lo mgca ulandelayo:
Okwesibini faka iphone kwi-dfu (umzuzwana we-2. Ngeqhosha lasekhaya kunye namandla acinezelwe, emva kwemizuzwana eli-10 ukukhulula amandla kwaye ugcine ikhaya lisemizuzwana eli-10).
Okwesithathu buyisela nge-iTunes kuguqulelo 3 (iqhosha lokushiya + ukubuyisela). Xa igqityiwe iya kunika impazamo ngo-3.1.2.
4 buyisela nge iTunes kwakhona kuguqulelo 3.1.2 (andazi ukuba kutheni iphinde yenziwa kwakhona, kodwa kwisifundo sithi njalo). (Iya kubuya nempazamo ngo-1015, kuyinto eqhelekileyo)
5º khuphela i-redsnow 0.9.4 kwaye uyisebenzise, ​​iya kuthi ijeleberak iphone kwaye iyakukhupha kwimowudi ye-DFU (le nxalenye ayikhange isebenzele mna okokuqala, yabanjwa xa kusele kancinci ukugqiba, ndiye ndajika icimile, ibuyele umva ukuze idlule i-redsnow nayo yonke into egqibeleleyo
6 ukuba ufuna ukuba ngo-3.1.3 yenza i-firmware yesiko kwaye uyibuyisele nge-itunes.
Elona galelo lililo eliye landinceda, enkosi uThixo kukho umntu owaziyo ngalo.
Wamkelekile u-adrian! kumnandi ukunceda. Ufunda kwiimpazamo, kwaye uyabulela ukulunga kuhlala kukho umntu ekwakhe kwenzeka kuye ngaphambili!
Ndifuna ukuhlaziya i-iPhone 2G yam ngekhonkco ondinike lona kodwa xa kulayishwa i-firmware 3.1.3 kundiphosa ngenombolo yempazamo engaziwayo 14. Inokuba yintoni? Ukususela sele enkosi kakhulu.
ULeonardo, kunokwenzeka ukuba yimpazamo kwifemu, ukuba ayikakhutshelwa ngaphandle ngokupheleleyo okanye ukuba ifayile yonakele, zama ukuyikhuphela kwakhona, kwaye ujonge ukuba xa igqityiwe ikhutshiwe ngokupheleleyo, hayi nje Inxalenye.
Molo uBerllin (okanye nabani na owaziyo). Ndine-3GS enenguqulo 3.1.3 kunye ne-iboot endala. Andinayo ikopi ye-shsh eCydia okanye naphi na. Ngaba akukho ndlela yokuqhekeka kwejele? Enkosi kwaye Malunga
Ukuba awunayo ikopi kwi-cydia okwangoku akukho sisombululo, kuya kufuneka ulinde ukuba bahlaziye i-redsn0w engenakukwazi ukuyenza nge-3GS
EBerlin, ndenza le undixelela yona kodwa ndiyayazi ukuba iapile kunye nevili le-roulette linje ngale nto ayicingayo kwaye ayindijiki. ungaphosa iiyure kwaye akukho nto. Into endinokuyenza kukuyibeka kwimowudi yokubuyisela, kodwa ayizukundivumela ndibeke ifirm 3.1.2 kuyo, le bendinayo. Ndizamile ukusebenza kweblacrain kwakhona kwaye kwavalwa. Ngaba ucinga ukuba ekuphela kwento endiyifunayo kukuyihlaziya kuhlobo 3.1.3? Kule meko, kuya kufuneka ndilibale malunga ne-jalib. ……
Kulungile, enkosi Villadelaniebla. Kuya kufuneka silinde ...
Umbuzo u-chic @ s ... emva kokuzama ukuvuselela ku-3.1.3 kwaye uyikraze kwaye uyifakile eyokuqala kwaye ndilahlekelwe yintolongo, ndiye ndaqonda ukuba ngeefolda ze-iphone ukuba ndingangena kwi-iphone ndize ndibone iifolda uqe Ndinayo.
Iyandithathela ingqalelo ukuba kulawulo lwabucala / var / ingcambu / iMedia / Cydia, kukho ifolda yokufaka ngokuzenzekelayo ... kolu lawulo awunakukwazi ukubeka nayiphi na ifayile okanye enye into ngendlela endifaka ngayo i-cydia okanye ndikwazi ukuvalela Apho?
Kwelinye icala, ngemini yayo khange ndiyenze i-ECID kwiCydia kwaye ke ukhetho lokuguqula ifayile yokubamba kwiiwindows ayisebenzi kum ... Kukho ithuba lokufaka ifayile kulawulo ngale ndlela ukuba inokugcina idatha kwindawo yogcino lwedatha yeSaurik ??
Ndiyabulisa bantu !!
pisha1980 ukuba uyibekile kwimowudi yokubuyisela (cofa iqhosha lasekhaya + amandla kwimizuzwana eyi-10, emva koko ukhulule amandla kwaye ubambe ikhaya imizuzwana eli-10 ngaphezulu) kuya kufuneka uvule iTunes, (iya kufumanisa ukuba unayo i-iPhone ekubuyiseleni imo), cinezela iqhosha lokushiya kunye nokubuyisela iqhosha, khetha ifemi ofuna ukuyibuyisela kwaye kunjalo. Ukuba ayikusebenzeli, yithi yeyiphi impazamo ekunika yona, unokuzama ukufaka ifemu yangaphambili njenge-3.0 okanye i-3.1, kwaye ukuba uyigcinile i-ecid kwi-cydia ngelo xesha unokwenza le bendiyithetha kumagqabantshintshi kamva, faka i-3.1.3. 3.1.2, kunye nokwehlisa ukuya ku-XNUMX
Ewe, njengomsebenzisi we-3GS, andifuni kuhlaziya.
IHaber, ndinengxaki encinci. Ndithengile i-iphone 3g, kodwa nge-firmware yoqobo ihlaziyiwe yaya ku-3.1.3. Emva kokulwa okuninzi, ndakwazi ukufaka iPwnageTool 3.1.5, kodwa into endingakhange ndiwele kuyo, kukuba iselfowuni ivela eSpain, kwaye umphathi wayo wokuqala nguMovistar, kwaye ndiorenji. Umbuzo wam, nangona ububudenge kuba ndisoyika impendulo, ngaba ikhona indlela yokuba ngoku nge-cydia kukho isicelo sokukwazi ukusebenzisa i-non-original opharetha, okanye ngaba kuya kubakho enye kwixa elizayo ???
Mholweni uBerllin !!! Ndinomdla kakhulu kuluvo lwakho, ukubona ukuba nindicebisa ntoni.
Ndine-3G esemthethweni evela kwi-Movistar ekungekho mfuneko yokuba ndiyihlaziye kodwa ndinyanzelwe kuba inguqulelo ye-firmware ephetheyo iya ingahambelani nezicelo ezininzi. Ngokukodwa, ndine-3.0 ene-basedand 4.26.08. Ndinomdla kuphela ekuqhekekeni kwejele (ngoku nakwixesha elizayo), ndikhulule ngokomgaqo hayi kuba ndicinga ukuba ndiza kuyifumana ngokusemthethweni. Ukuthatha ingqalelo yokuba ndinqabile kwi-firmware yesiko, oko kukuthi, ukuba kunokuthintelwa ngcono, undicebisa ukuba ndenze ntoni? Ndingabeka isiko eli-3.1.2? Ngaba ndihlaziya ku-3.1.3 ukusuka kwi-itunes kwaye ndiyinike kwakhona?
Ukuba inkampani icime umatshini wokuphendula
Kuxhomekeka kwi-iPhone onayo kwaye ukuba ifayile ye-ECID igcinwe kwiCydia kwimeko yee-3Gs
Ndikufundile kamva kwaye ndiyabona ukuba uyisombulule. Kwimeko yakho kungenxa yokuba uya kuba ne-3G kwaye enye yeyokuqala, kwezi zimbalwa
indlela yokubonisa ukuhleka
ngekhe emva kokuba ulayishe i-baseband kwi-3.1.3
IBlacra1n ye-3.1.2 kuphela.
Inye kuphela into enokwenzeka ukuba ungathoba i-baseband
Ukuba i-iPhone yakho iyi-3G, jonga ukuba unethamsanqa elifanayo nelika-Edu
Ngenguqulo 3.1.3 awukwazi ukufaka iBlacra1n
Kukho iindlela, kodwa kuxhomekeke kudidi lwe-iphone kunye namanyathelo angaphambili owathathileyo
Ewe kuphela kwendlela ene-3GS. Kwaye yayisele ilumkisiwe ngazo zonke iiforamu, kunye namaphepha ewebhu ukugcina iifayile ezihambelanayo eCydia ukuze konke oku kungenzeki ...
Kude kube ziintsuku ezingama-2-3 ezidlulileyo ukuba iApple isayigcinile imisayino ka-3.1.3, ukuba inako, kodwa ukuza kuthi ga kulo mhla akusekho
Yeyiphi iphone onayo?
ayisiyiyo ukuba ndiyazi
yeyona nto kufanele ukuba yenziwe
Kodwa fakela ngeCydia:
Makhe sibone ukuba unethamsanqa na
Ndizamile, kodwa i-bootloader yam yi-05.09, kwaye i-funzzyband isebenza kuphela kude kube ngu-05.08, kodwa kuncinci kakhulu ukuyithatha ukuyikhupha, ngekhe ndimangaliswe ukuba isonjululwe kwiveki okanye ezimbini ze-XD
Andisiqondi ukuba kutheni unqabile ukugcinwa ngokuqinileyo ukuba yinto nje yokuqhekeka kwejele endaweni yokuba uyenzele omnye umntu ikwenzele kwaye uyifake nje.
Nje ukuba ubeke isiko le-3.1.2, hlala kunye nolo, kuba u-3.1.3 uphuculo oluncinci oluzisiweyo lusebenza kwi-ipod Touch kwaye awukho mngciphekweni wokusilela.
Yintoni ongayenzanga phantsi kwazo naziphi na iimeko ukulayisha ku-3.1.3 nge-itunes, kuba une-baseband ye-luxury, yigcine ...
UJAIRO FERNANDEZ sitsho
NDILINDE EKUSETYENZISWENI KWEJELE UKUYA KWINTO IPOD TOUCH 3G 64 3.1.3 ENDITHENGA NDITHENGE NDAYE NDIFIKE NGEVERSION XNUMX NGOKUQINILEYO ANDINAKUBEKA UKUBEKA IZICWANGCISO ZAM EZINOKUTHANDWA NDINazo KWI-PC YAM KULUNGILE. ENKOSI NGOKUQHUBA KWAKHO UKUQHUBA.
Phendula JAIRO FERNANDEZ
Kodwa ukuba nge-3GS Botloader 5.06 kwaye ine-3.1.2 5.11.07 kunye ne-ECID egcinwe kwi-cydia, singabeka i-firm 3.1.3 nge-pwnagetool ukugcina i-5.11.07 kwaye siyikhuphe nge-ultrasnow? kukuba andilunganga nyani ngo-3.1.2 kwaye iblacknow ndifuna utshintsho, enkosi
Ukuba usebenzise iBlackra1n, ngokuqinisekileyo iPwnageTool ayiyi kwamkela.
Kodwa endaweni yokwenza into oyithethayo kuba awuyibuyisi ibuyele ku-3.1.2 kwaye udlulise uMhlophe kuyo kwakhona. Ndiyakuxelela kuba zombini ezam kunye nezinye endizenzileyo kubahlobo zisebenza kakuhle kakhulu nge-1.
Ukongeza, kuthethwa ngothungelwano ukuba kubonakala ngathi i-3-1-3, inika iingxaki ngebhetri kwaye ayinakuphuculwa kwi-iPhone, inokuninzi nge-iPod Touch.
LETICIA OROZCO sitsho
THENGA I-IPOD TOUCH 3G 64 GB MODEL MC, YAYIZA NENGUQULELO 3.1.2, NGEPHUTHA NTOMBEKAZI YAM YAYIHLAZIYA IYA KWI-3.1.3 NDINOKUQHUBEKA NOKWENZA I-JAILBREAK YAKHE. NDILINDELE IINGcebiso ZAKHO
Phendula LETICIA OROZCO
ukristina orozco sitsho
THENGA I-IPOD TOUCH 3G 64 GB MODEL MC, YAYIZA NENGUQULELO 3.1.2, NGEPHUTHA NTOMBEKAZI YAM YAYIHLAZIYA IYA KWI-3.1.3 NDINOKUQHUBEKA NOKWENZA EZINYE IIJELE. NDILINDELE IINGCEBISO ZAKHO EZIXABISEKILEYO.
Phendula ucristina orozco
hello berllin, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ngokubhekisele kumsonto ekuqwalaselweni malunga no-3.1.3, undixelele ukuba nge-iphone 3g ene-baseband 4.26.08, uya kuyidlulisa i-firmware oyenzileyo, ndinentandabuzo engenangqondo, ndinguye Ukubuyisela, kwaye Ekupheleni kwenkqubo indixelela ukuba ukuba ndifuna ukuyilungisa njenge-iPhone entsha okanye ukuyibuyisela, umbono wam kukuyibuyisela, uyiyeke icocekile, yenza i-ultrasn0w, kodwa ungalahli abafowunelwa, i-ajenda, njl. , ndenze ntoni?
enkosi kwangaphambili ngoncedo lwakho olubaluleke kakhulu
Ndine-pixa exa eyonakeleyo ...
Ndine-3G 3.0G yemististar eqinileyo ye-XNUMX ejele
ngoku ndifuna ukuhlaziya kwaye andinamdla wokukhulula ke ukulayisha i-baseband akunamsebenzi kum. kuba kwiinyanga ezimbalwa ndiza kuba nakho ukumkhulula ngokusemthethweni (Ndithi ...)
Ndenza ntoni ngale nkqubo? ikhephu okanye ipwn?
yeyiphi engcono? Ngaba ikhona enika iibugs?
Ndilibele ukuba ndineMAC
EBerlin, ndinengxaki enkulu. Ngaba ndinganxibelelana nawe nge-msn?
Unxibelelwano lwe-Intel sitsho
kuya kuvulwa nini ukuvulwa kuka-3.1.3 ???????????????????????????
Phendula unxibelelwano nge-Intel
Ufff ndingoyena mntu unemincili okoko ndabeka imilenze kwaye ndihlaziya iphone ye-iphone kwinguqulelo 3.1.3 andazi ukuba zinjani malts. Ndineeapile
Ubushushu obuninzi kwaye eyona nto ilungileyo yi-3g 16gb ngoku ayisiyonto ngaphandle kwe-ipod tach ..
jonga abo bahlaziya izixhobo zabo kuhlobo 3.1.3 kwaye bane-5.12.1 baseband bavakaliswa kwaye ukuba abanayo, imibuliso igcinwe.
IBerlin, nceda, ndiyazi ukuba ayinanto yakwenza nesihloko, kodwa okoko ndafaka i-Intanethi
Ndiphulukana nophawu rhoqo kwisiqingatha seyure okanye njalo
kwaye i-wifi ayisebenzi, okwangoku ndinayo ikhefu lasejele kunye ne-ra1n emnyama ngenguqulo3.1.2 kunye ne-iboot entsha ndingathanda ukwazi ukuba ndiyisusa njani i-Intanethi njenge-iphone kwi-iphone
Uxolo kodwa hayi
Njenge-iPhone entsha kwaye ungqamanisa abafowunelwa njalo njalo ...
Ngenkqubo yokungafaki i-baseband, kuba ayisiyokuyikhulula kuphela, kodwa ukuze ukwazi ukuyiphula kwaye ukuba awuyilayishisi, uya kuhlala unokhetho oluninzi.
NGAPHANDLE KWAKUKHULA: IPWNAGETOOL
Hayi, kuba andikho ndaweni-nye, ndingena emsebenzini wam apha kwizithuba ezimfutshane kakhulu phakathi kwesigulana nesigulana, kwaye kuba ndihlala ndisebenza ngalo lonke ixesha, andizukunxibelelana xa ndikunye nosapho lwam.
Mhlawumbi zange ...
Ndicinga ukuba ukhe wayijonga iBotloader, ukuba wawune 05.08
Kuya kufuneka ulungise ingxaki ye-wifi kuqala.
Ungathini, ngokuqinisekileyo uya kuba nengcebiso ethile, ndinayo i-iPhone 2G ngo-3.1.2 kodwa iYouTube iyekile ukusebenza ixesha elide, ayivuli kwaye iphawule impazamo, nangona kunjalo ukuba ubona iividiyo ezinesinye isicelo (mx tube). kungenziwa ukulungisa? Ndiyaluxabisa uncedo lwakho. Imibuliso evela eCancun Mexico.
i-berllin ukuba sele ndiyijongile, engasebenzi kum, inkqubo oyikhupheleyo kwi-cidia ayinayo ayisebenzi yokudlala sonao enkosi.
Molo ndifuna uncedo ngoku!
Ndine-3gs ye-iphone esuka kwi-movistar ndiyisebenzisa nge-vodafone firmware 3.1.2, kunye ne-baseband 5.11.07, endikunike ukuba ndiyilungelelanise kwaye ndiyiqale ngokutsha kwaye ngoku ifuna i-iTunes kwaye xa ndiyidibanisa ne-blackrain iyakwazi ukuqala kodwa mna fumana ibha enesiqingatha sokulayisha, kodwa iphelela embindini kwaye iqale kwakhona.
Ingxaki endinayo ngoku kukuba ukuba ndiyibuyisela njengenguqulo 3.1.3 izakundenza ndiyibuyisele kuhlobo olo, ngenxa yoko ndifuna isiko eliyi-3.1.3 firmware ukugcina i-jailbraik kunye ne-baseband, okanye ukuyibuyisela ngokupheleleyo kwaye uqale ngokutsha ., Khumbula ukuba isuka kwimovistar kwaye ndiyisebenzisa nevodafone,
Awungekhe uqhekeze i-3.1.3 kuba kuloo firmware akukho lukhululo kwaye ke ngekhe usebenzise ikhadi lakho leVodafone.
Unganyanzelisa ngeBlackra1n ukubona ukuba ekugqibeleni iyakubamba na.
Ungazami ukufaka kwakhona i-firmware 3.1.2 njengoko i-iTunes ingayi kuyivumela kuba u-Apple uyisayinile loo firmware. Ungafaka kuphela i-3.1.2 ukuba uyigcinile ifayile ye-ECID kwi-Cydia ngelo xesha.
Ndiyoyika ukuba uyifumane ngeBlakcra1n okanye ugcine ipod.
Kufuneka kubekho isisombululo ,,,
Ndizama nge-blackrain kwaye akukho ndlela.
Ukuba ndiyifaka kwifirmwa
akukho firmware firmware yesiko 3.1.3 yokugcina i-baseband, bandixelele ewe ,,,
Ifayile ye-ecid esecydia ndiyifumana phi? Kwaye ndazi njani ukuba ndenze ikopi yento ebendinayo?
Isiko eligcina i-Baseband ligcina i-Baseband oqala kuyo ngeJailbreak kwaye sele uyilayishe kuhlobo lwamva nje olungayixhasiyo iJailbreak okwangoku.
Ifayile ye-ECID yifayile yangaphakathi ukutsiba utyikityo lwe-Apple firmware kwaye ukwazi ukukhuphela i-Baseband ukwenza iJalbreal kwaye kwafuneka uyiqinisekise okanye hayi xa wawuku-firmware yangaphambili, ukusuka kwiscreen sokuqala seCydia.
Molo berllin, ndikucacisele, ndine-iPhone efudumeleyo efudumeleyo esandula ukuphuma eziko, hehe, ngokungathandekiyo, ndinee-3gs ezine-3.1.3 kunye ne-baseband entsha ye-05.12.01, umbuzo wam uthi:
Ngaba ikhona into endinokuyenza ukuze ndiyiphule?
Ndifuna ukuyenza le nto kuye kuba ndinesivumelwano noMovistar kwaye andifuni kutshintsha okanye nantoni na enjalo, ndifuna ukumfaka ejele kwaye ndikwazi ukusebenzisa izicelo ezihlawulelweyo, ukuba ndinganakho, ndingathini yenze?
Ukwanga kunye nosizi ngokungalunganga.
Ndicinga ukuba unayo iBoot entsha ngento ongenako ukuyenza
UJAVI GARCIA sitsho
NDIKWIMEKO NJENGEJORGE, NDINE-3GS NE-3.1.3 KUNYE NE-BASEBAND 05.12.01, KODWA NE-IBOOT ENDALA, OKUHLE. ANDINAMDLA KUKUKHULULWA, KODWA KWIJELE.
Phendula JAVI GARCIA
umbuzo omdala we-berllin ongazi ukuba uza kuthatha ixesha elingakanani ukuvula
I-baseband 5.12.1 kutheni ufunda iindaba esele zifumene indlela yokuvula i-baseband ndiza kuyibulela imibuliso yakho yezimvo.
khululeka kuwo wonke umntu onenguqulo 3.1.3 kunye ne-baseband 5.12.1 enye yeendaba ezikulungele ukukhutshwa inye kuphela into elahlekileyo andiyikhumbuli kodwa kungekudala izakulunga ..
Masibone ukuba ukhona umntu onokundinceda. Ndine-3gs enejele kwaye ndikhululwe.Iintsuku ezi-2 ezidlulileyo ibivaliwe kwaye isisombululo endisifumeneyo kukuphuma nayo kwiifowuni eziphathwayo kwaye ekuphela kwento abanokuyenza kukugcwalisa kwakhona nge-3.1.3. intwana ye-esile, ndiyahamba ndiye ndiqale ukudlala ngale ndlela ichazwe nguJoan apha ngasentla malunga nephutha le-1015. Andiphumelelanga nto, kwaye ekuphela kwendlela yam yokuphuma ibikukuhlaziya nge-itunes kwakhona ukuya ku-3.1.3, kodwa xa ndibuyise nje iphone andixelele ukuba beka sim yoqobo (endingenayo kuba ndiyithengile kwi-intanethi kwaye iphone isuka e-O2 isuka eNgilane). Ndingenza ntoni ukuze okungenani ndiyiqale ukuze ndiyisebenzise njenge-ipod. Ukuba ndinokuyiqala, ndingenza into ukuyikhulula.
ENKOSI nonke ngomonde wenu.
Iindaba ziyavela ukuba sele ivuliwe kwaye uqaphele ukuba oku kuphume ngoku kukukhwabanisa nje ukufumana imali kwaye inyamalale ngokukhawuleza.
-Udinga ikhadi loqobo ukuze ulivule kwaye ulisebenzise kuphela njenge-ipod, kuba ndicinga ukuba awuyigcinanga ifayile ye-ECID eCydia njengoko bekufanele ukuba uyenzile kwimeko enokwenzeka kwaye ke ube nakho ukwehlisela ku-3.1.2
-Ukukhululwa okwangoku akukho nto
Molo eBerlin, ngaphandle kwezona zimvo zakho, okanye umntu othile kwiforum eyenzekileyo kuye, ibhetri ishiywe ibekelwe indawo, ndiyicimile xa ndiyifaka, iapile iyaphuma, iyaqina, iqale kwakhona, Iyaphinda ibe ngumkhenkce kwaye njalo njalo iyayidlulisa.Ndiyidibanisa neLaptop iyayamkela kodwa xa iyimisa ikhuphe kwi-itunes okanye ifolders.Ngaba kuya kufuneka ndibuyise kwakhona? Okanye unayo enye indlela.Ndikhumbula ukukhuphela i-cydia backup kodwa andikaze ndibenayo. Enkosi nemibuliso evela eCancun.
Molo jonga, ndine-3gs ye-iPhone ene-iboot endala, ewe, bendizibuza ukuba ingaba ikhona na i-jaillbreak okoko ndinenguqulo esemthethweni engu-3.1.3 ye-iTunes, nceda uyivule. I-AT & T: Indiya
Indian) inja kuya kufuneka ukhuphele i-redsnow 0.9.4 kunye ne-fiwere 3.1.2 xa uvula i-iphone kodwa ungayikhululi kuba ingekabikho indlela yokuyikhulula ukuba uyitsalele umnxeba de ufumane esinye isaziso ..
Molo ndinengxaki enkulu,
Ndine-iphone 3g ene-installus kunye neenkqubo ezininzi, kwaye ndize nombono wobudenge wokufaka i-firmware 3.1.3, nge-Itunes, kwaye kuvela ukuba ikhompyuter yam yaphazamiseka kwaye ndashiywa ndibiza nje ukungxamiseka, kwaye iTunes indixelela ukuba ikhadi le-sim alisebenzi, ndizamile nezinye iichips kwaye umyalezo uyafana… ..
Ndingayihlangula njani nceda !!!!!, khuphela sn0wbreeze, kodwa ifuna i-firmware 3.1.3. ipsw kodwa andiyifumani kwaye iphone yam ijongeka njengezitena zokwenyani.
Idityaniswe kwigridi kwimeko yebhetri ephantsi:
Cinezela iqhosha lasekhaya kunye namandla ngaxeshanye de icime kwaye ucinezele umbane de ube uvule kunye neapile ulinde.
Ukuba emva kwemizuzu eliqela ingathathwanga, phinda lo msebenzi amatyeli aliqela ahlala esonjululwa
Kodwa ufaka i-0.9.4 endaweni ye-0.9.3:
eto yenza i-jailbreak kodwa ayiyikhuphi
Xa ndifika endlwini yam, ndiza kuyikhangela kwaye ndiyigcine engqondweni, ndiza kuba namatyala kuwe .. enkosi kakhulu kwangaphambili ...
Ndikhuphele i-redsn0w 0.9.4, kodwa indicela i-IPSw kwaye andifumani ndawo yokuyikhuphela. Ndizise iphone yam ivela kwelinye ilizwe kwaye ndiyisebenzisa no-ENtel CHile.
ibhanti yebhanti yi-05.12.01, i-botaloader 5.9,
into endiyenzayo? ndiyacela
hello bellin jonga indlela oxelelwe ngayo apha ngentla, ndikwangumsebenzisi we-64g ipod touch abandinike yona kutshanje ehlaziyiweyo ukuba ibe ngu-3.1.3 ... kodwa andikwazi ukuyichaza loo MC ... ebhokisini ithi inombolo yenxalenye kwaye ... iqala nge-MC… .Ndicinga ukuba ingayilonto, akunjalo? Ndifundile ukuba ukuba wehlisela ku-3.1.2, ukuba inokuhlengahlengiswa? Ngaba kukhuselekile ukwenza njalo?
Ndimtsha koku kwaye ndinenguqulo entsha engu-3 32gb iphone 3.1.3gs ene-movistar.
Ukusuka kwinto endiyifundileyo andikwazi ukuba nejele
Kodwa ungazi njani ukuba yeyiphi ibhendi esezantsi?
Ngaba i-cydia ingafakwa ngaphandle kwe-jailbreak?
Molweni magcisa, ndingu-iphone 3g 3.1.2 Ndihlala ndisebenzisa i-win scp enpezo borar stacks ekugqibeleni iphone yam ihlawule kuphela ngoku akhonto iphumeyo yodwa iapile ezinye iingcebiso nceda
raul kunye neJavirose
Sukucima usetyenziso nge-WinSCP, kuya kufuneka uyikhuphe
-Ngoku cofa iqhosha lamandla kunye neqhosha lasekhaya ngaxeshanye de icime iphone.
-Ngeqhosha lamandla uyalilayita kwaye ulishiye imizuzu embalwa ukuze libone ukuba liyabanjwa na.
-Ukuba ayibambi, phinda usebenze amaxesha ama-2 okanye ama-3 ngaphezulu.
-Ukuba ekugqibeleni ayithathiwe, buyisela nge-cist5om firmware kwi-3.1.2.
Lumka ungahlaziyi ngetunes ukugcina i-baseband yakho
Ndine-3GS, ekhutshwe nge-blara1n, i-firmware 05.11.07, ndingayenza i-jailbreak? Andinalwazi lokuba ngawaphi la magama obuchwephesha e-baseband, njl.njl, njl.njl.
imibuliso kunye nemibulelo kwangaphambili
Ukuba sele unayo ii-3Gs ezikhutshwe ngeBlackra1n, oko kuthetha ukuba sele unayo i-jailbreak, ke ungacingi nokuyichukumisa
andikwazi kuhlaziya ku-3.1.3?
Kutheni ufuna ukubeka emngciphekweni ukuba neengxaki kwii-3Gs zakho, ukuba le firmware ayizisi nto intsha kwi-iPhone.
U-Apple ukwenzile ukuphucula izinto kwi-iPod kwaye ngelishwa ushiye abantu abaninzi bexhonywe ngee-3gs, ngokuphulukana nokuqhekeka kwejele
Enkosi ngeposi yakho, kulungile, akukho nto, ndihlala ndinje, ndiphilile.
Molweni nonke, ndinayo (i-tomtom kunye ne-sygic) ndiyikhuphele kwii -apps ukuba ungandinceda ukuba ndihlaziye ngo-2010 okanye ndifumane umbono olithoba
Molo uBerllin (okanye ngubani owaziyo). Ngaba ukhona umhla oqikelelweyo we-GeoHot okanye i-DevTeam yokukhupha i-jailbreak ye-3.1.3? Ngaba ixhomekeke ekubeni iApple ikhuphe i-3.2 okanye i-4? Ngaba uyawazi umhla woku? Enkosi
Andinalwazi lokuba ndingaqhekeza njani i-iPhone 3GS.
Ndiyazi kuphela ukuba isiphelo sam sivela eMovistar, ukuba i-iPhone yam inenguqulelo yamva nje: 3.1.3 kwaye ayikhuphi.
Ndifuna ukwazi ukuba ndingayiphula njani ejele ukuze ndikwazi ukufaka usetyenziso olungekho simahla kwiVenkile yeApple. Nceda, ukuba umntu angandinceda, ndiphendule. Enkosi.
berllin, ungandinceda ngombuzo endikhe ndawubuza ngaphambili?
Akukho nto ibambekayo ngalo mzuzu
Kuya kufuneka uyazi ngokuchanekileyo iBoot yakho ukuze wazi ukuba ungayenza iJialbreak okanye hayi kwaye nguwe kuphela onokukwazi:
Ukusuka kwi-iphone 3g 3.1.2 ayinakuqhagamshela kwiYouTube nceda umntu ondincede asombulule ingxaki enkosiaaaaaaaaaaaaaaaa
Mholo!! Kuyavela ukuba ndine-3gs, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo (ngokuchanekileyo xa i-3.1.3 yayisungulwa) i-iphone yam yaphazamiseka, yahlala kwi-apula kwaye ayizange iqale, de ndadikwa kukuba ne-iPhone yam ifile kwaye i-ps iphumelele ubuncinci ukuba izakuqala ukuyihlaziya ibe ngu-3.1.3 kodwa i-ps ifumana i-SIM kuphela kwi-Movistar, kwaye i-ps nokuba yeyiphi imo ngoku isebenza kum njenge-Ipod (I-iphone yam ayiveli apha, ke andinandlela yimbi ngaphandle kokuba ivulwe kunye ne-ps kangangoko kunokwenzeka ukuba yaphulwe). Ikhangeleka njani ipanorama? I-ps andazi ukuba ndenze ntoni ngaphandle kwefowuni yam, ndinxunguphele ngokwenene. Andiziboni iindaba ezilungileyo, ngaba ukhona umntu onoluvo?
Izolo bendibuyisela i-iphone 3gs enenguqulo 3.1.2 (bendisele ndiyenzile iblackra1n kwaye ndiyikhuphile, kodwa ndifuna ukucima IIMFANEKISO NEZOQHAGAMSHELWANO, ndiye ndaya GENEREAL ndicime IDATHA, kwenzeke ntoni? I-logo ye-Itunes kunye ne Cable, kwaye andinakho ukubeka nayiphi na i-firmware kuyo, zama kwi-ITUNES nge-iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore kwaye i-itunes iphuma ngeempazamo ezingama-3004 kunye nama-3194 (Oko kukuthi, ayikuphumelela kuvavanyo olusayinwe yinxalenye iapile, ngoku zama redsn0w-win_0.9.2 kwaye ayibi, iyayenza inkqubo yayo kodwa ibuyisela kwakhona ngokufanayo kunye ne-itune icon kunye nentambo ...
Andifuni ukuyihlaziya kuhlobo 3.1.3 ngezizathu ezicacileyo.
Ngaba ikhona indlela yokuvuselela ifowuni yam?
Kudala ndifunda iiforamu kunye neewebhusayithi imini yonke kwaye andifumananga sisombululo
ukuba awuyigcinanga ifayile ye-ECID eCydia ungalayisha kuphela ku-3.1.3
Ewe hayi, wayesandula ukuyithenga kumhlobo wakhe, kwaye wayengekamenzeli nto kuloo nto ...
Kuba bendingenayo iphone ixesha elide, ndiza kubalinda ukuba basombulule okanye bakhuphe iApple ukuba ifake uhlobo olulungele enye, kule meko 3.1.2
Nangona kunjalo, ukuba umntu uza nesisombululo, nam ndiza kulinda
Enkosi ngokungxamiseka kwempendulo yakho kwi-berllin
Ndikuxelele ukuba uthenge i-IPOD Chukumisa i-2G ngohlobo 3.1.3, ngelishwa andazi kwanto ngawo onke la magama uthetha ngawo, ngaba sikhona isikhokelo sabaqalayo sokuchaza ukuba kukhutshwa ntoni, uyenza njani njl. Njl? Besele ndikhuphele i-ziphone 3 kodwa khange indincede kwaye kule ndiyifundayo apha izakuba yiyo.
Ngaba ukhona umSamariya olungileyo onokundazisa koku nceda?
Molo K, IINTSUKU EZIMNANDI, NDIMNTSHA KULOLUHLOBO LWEETEKNOLOJI, THENGA IPHONI E-16G, ZISA INGENISO 3.1.3, KWAYE KU-ITUNE WANDIXELELA K KUKHO UHLAZIYO K UKUBA NDIFUNA UKUYIHLAZIYA, NDITHI EWE, ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA OKULUNGILEYO NDAKUGQIBA NDAYE NDIXELELE UKUTHI ISIM ASINGAVUMELANI OKANYE INTO, NJENGOKUBA YAYIKU-EINGLES, YAYE YALAHLEKA YONKE IMISEBENZI YAYO, NDAYISA KWINDAWO ABAYILUNGISELELA IIMFONI ZESelfowuni BAYENZA I-EHCAR UKUHAMBA KUYO KUYO YONKE IMISEBENZI NGAPHANDLE KWESELILI, YILA NGAPHANDLE KWESIGQIBO OKANYE NGAPHANDLE KWENKONZO OKANYE UKUKHANGELA NGOKULULA, YINTONI ENDINGAYENZA UKUQONDA ISIMI SAM, NDIFUNA UNCEDO NGOKUQINISEKILEYO.
Molo ntsimbi, ngoku le fowuni incinci ayifuni ukungqamanisa ne-iTunes, ibisenza yonke into yesiqhelo kude kube izolo, namhlanje iyaphawula ukuba ayinakufunda umxholo we-iPhone kwaye iya kuseto kwaye, isishwankathelo isithuba kwaye ucofe ekubuyiseleni ukubuyisela ubumbeko lomzi mveliso wokuqala.Njengexesha, ucinga ukuba yintoni enokwenziwa ... ukwanga
Olona hlobo kuphela lokufunda lincinci kancinci ngokufunda kwi-Intanethi.
Ngapha koko, andicingi ukuba ungaphula i-jailbreak nge-iPod yakho.
Awudingi kukhululwa kuba ayisiyiyo iphone
Yeyiphi ibaseband onayo?
MMMM ANDIYAZI UKUBA YINTONI IFIMWARE, KANYE I-PS ASIYO IPOD YI-3G IFONE, KANYE KE BANDIXELELA UKUBA ISOFOFA ELANDELAYO KUFUNEKA IPHUME EMVA KOKU-3.1.3. KANYE KE ANDIZI UKUBA IMFAZWE YOKUPHUMA OKANYE UKUBA KUNOKWENZIWA KWENYE INTO, NDIDINGA UNCEDO
Molo, enkosi ngokuphendula, ndinendawo yonke njengoko usitsho, 2g endala, ndayiqala kwakhona ngokuyibuyisela ku-3.1.2 kwaye yonke into yayilungile, andikwazi ukugcina izinto zam kuba andikakwazi ukufunda gcina (ii-ifiles kunye ne-apt back up, njl.) engakwenziyo i-iTunes, kodwa ngoku ikhamera ayisebenzi, ndithatha iifoto kwaye azizisindisi, azinanto, ayinanto, ndiyajonga ukuze ndibone yintoni enye endineziphene kuyo, ndiza kukuxelela, emsebenzini andinaWi-Fi ngoko ke andijongi kwaYouTube. Iyahlekisa into entsha ephuma ngalo lonke ixesha… mhlawumbi yile nto siyithandayo nge-iPhone…. Enkosi kwakhona ukubulisa kwaye uyazi… .ngoyena ungcono…
Ngena nge-SSH kwi-iPhone kwaye uye kwindlela:
/ var / mobile / Imidiya / DCIM
Jonga iimvume kwaye ubeke i-777
Ukuba le ngxaki ayisombululwanga, kukho enye ifolda ngaphakathi kwi-DCIM ebizwa ngokuba yi-100APPLE ekufuneka nayo ineemvume zitshintshiwe ngendlela efanayo neyangaphambili ukuya kuma-777.
Enkosi berllin, mandizame, xa ndibona impendulo yakho ndizamile iphone ifolda ilandela umendo kodwa ayibuzi mvume, ke mandizame ukusebenzisa i-ssh njengoko ucebisa kwaye ndiza kukukhathaza xa ndinento, engcono ngokubhekisele.
Molo, ndine-3gs 16g enenguqulo 3.1.3 kunye ne-iboot entsha, ndifuna ukufaka i-cydia, ngaba kunokwenzeka ngayo nayiphi na inkqubo ekhankanywe apha ngasentla?
Kwaye akukho nto inokwenziwa? Okanye kufuneka ndilinde?
Molweni nonke, ndine-3GS 3.1.2 iboot 359.3.2 yokuba kude kube namhlanje ihamba kakuhle nge-blackra1n, ngaphandle kokuba andibonanga nethiwekhi ye-Wi-Fi ngoseto lwe-iPhone, kuye kwafuneka ndiyenze ngesicelo sangaphandle (kwi Ityala lam wififofum) ukuze ndikwazi ukuqhagamshela kuyo nayiphi na inethiwekhi. Inyani yile yokuba ukuzama ukuyilungisa, ndibuyisele ukhetho lwenethiwekhi kumaxabiso efektri kunye newhoosh! Iphone yam isusiwe kwaye ukusukela ngoko khange iqale okanye idlulise iblackra1 kuyo kwakhona. Khange ndiyihlaziye iye ku-3.1.3, ekuphela kwendlela endikunikwa yi-iTunes, kwaye ndifumene kule forum ukuba i-ECID kufanele ukuba ilayishwe kwi-cydia…. Ukuba andiyifumani i-blackra1n, ngaba ndinayo enye indlela? Andikhathali malunga nokuyikhupha, kodwa ingandinika okuninzi iesile ukuba liphume ejele ... Enkosi ngentsebenziswano !!
Undixelele ukuba ukuvula i-youtube kwakhona kufuneka ndikhuphele i-Push kwi-cydia, kodwa ngoku ayisekho kwaye ndicinga ukuba dr. Push kodwa khange uyenze isebenze, ikhona into engahambi kakuhle. Okanye kuphela kwento, andazi, ndacinga ngokungena kwi-ssh kwaye nditshintshe imvume okanye enye into.
Molo! Ngexesha elithile elidlulileyo umhlobo wenza into nge-iPhone yam, inyani yile, andazi ukuba yayiyintoni kuba ndimtsha kule nto, yonke into isebenza kakuhle kum, into endiyithandayo yi-INTERNET THETERING kunye ne-APPLICATIONS kunye neTONES SIMAHLA , wandifaka nditsho ne-multimedia msgs Ke yonke into yayihamba kakuhle kwaye ndonwabile nge-IPHONE 3G yam .. Kude kube ngenye imini ndavuka ndingena siginali, ndayicima ndifuna ukuphinda ndiyifundise ayisekho! Yabambeka kwi-mananita ye-apile ndaza ndayibuyisela, ngethamsanqa ndaye ndagcina i-backup eyenziwe ngumhlobo wam (ethi ngendlela umhlobo wam akasekho apha) kwaye ndakwazi ukubuyisa abafowunelwa bam nayo yonke into .. Kodwa ngoku andiyi zine-tethering, ziimisgs zemultimedia kuphela eziqhubeka ukuvela, nangona zingasasebenzi kunye nokusetyenziswa kwamanqaku elizwi .. Ngokucacileyo ngexesha lokubuyiselwa (kwaye kuba ndimtsha kule nto kwaye bendingazi ukuba ndenzeni) kuye kwafuneka Hlaziya i-iPhone kuhlobo 3.1.3 (7E18) .. kunye neModem Firmware 05.12.01 le ndiyibona kwifowuni yam kwiiSetingi / Ngokubanzi / kuLwazi… bendifuna ukwenza i-jailbraik nge-blackra1n kwaye ndifunde iwaka lezithuba! Kodwa sele ndifunde kakhulu kwaye ndibhidekile kunakuqala .. NDIYAFUNA UNCEDO, nokuba kukuya ejele okanye nantoni na efunekayo kwinto endiyifunayo .. YINTONI UKUFUNDISA KWI-INTERNET KUNYE NOKUFAKA IZICELO KWAMAHHALA .. nasiphi na isisombululo? Ndiyabubulela kakhulu ubulumko bakho obukhulu. Ndivela eMexico kwaye ndikunye ne-TELCEL kwaye ndinepakethe yedatha ENGABEKEKELWE MALI ... ke ayongxaki kuba sele ndinethutyana ndisebenzisa i-tethering kunye ne-telcel, akaboni!
Molo, ndithenge nje i-itouch 32 g enenguqulo 3.1.3 kwaye kukho amaphepha amaninzi angandivumeli ukuba ndivule, kwaye andikwazi ukuncokola nomthunywa, okanye ukufaka uGoogle umhlaba kunye nezinye izinto ezininzi. Umntu othile
Ungatsho ukuba kufuneka ndenzeni? Enkosi
Ngaphandle kokuba into indibaleke, awunasisombululo
Zama i-Fishbone "Push Notification Fix":
Sele ndiyifundile indawo enkulu yale forum kwaye nangona ndiqonda ukuba mhlawumbi ingxaki yam asisekho isisombululo ndingathanda ukuba undiqinisekise ...
Ingxaki yam njengabanye abaninzi ihlaziya iphone ngohlobo 3.1.2. Ndenze le mpazamo inkulu ngefowuni yomhlobo wam (ndiyazi ukuba ndiyifumene emdaka) kodwa kuba ndinayo, itouch kwaye ibingakaze yenzeke kum, kuba ukungazi kundiphumelele. Andiqondi nokuba uninzi lwamagama owasebenzisela ukusetyenziswa kwiinguqulelo ezahlukeneyo. Le iPhone ayisiyonto intsha, ukuba andiphazami ifana nohlobo lwe2G. Kuqala ndedwa khange ndiphinde ndisebenzise i-sim kodwa eseleyo ibilungile. Kwingcebiso yomnye umntu sibuyisele yonke into kodwa ngoku ayiyiboni itunes. Ngokusekwe kwinto oyaziyo, ungandixelela ntoni ngeli tyala? Ndiyayixabisa impendulo.
Ukuba unayo i-2G iPhone, akukho ngxaki:
Ndine-3GS efakiweyo kwaye ndisebenza ngokugqibeleleyo, kude kube izolo ngempazamo kwenzeke ukuba ndihlaziye itunes ukuya ku-3.1.3, kunye ne-baseband ukuya ku-5.12.01. Isebenza kakuhle, kodwa ndingathanda ukuyivula, kwaye kuba andiqinisekanga ukuba i-pwnage 3.1.5 iyakusebenza, andinabuganga. Ngaba ikhona indlela yokuyivula? Ndiyabulela kakhulu kwangaphambili ngoncedo, njengoko ndingxamile ngenxa yokuba sisipho endifanele ukusenza ngomso. Ndiyabulela kakhulu.
Ndine-3g ye-iphone eyaphukileyo (kuphela i-jailbreak engakhange ikhutshwe) eyenziwe nge-blackra1n, ndingayihlaziya i-3.1.3 nge-PwnageTool 3.1.5 emva koko ndiyikhulule nge-ultrasn0w ???
Rob kunye nery44
Ndine-3GB 16G, kwiveki ephelileyo ibivaliwe kwaye kuye kwafuneka ndiyibuyise, endiyihlaziyileyo ukuya ku-3.1.3 yokuphulukana nokuqhekeka kwejele, emva kokujonga okuninzi nokujonga okuninzi kwaye ndiyincamile ilahlekile, kuya kufuneka ndikuxelele ukuba ndinayo ikwazile ukuyithoba ibe ngu-3.1.2 .1013 ekuqaleni ikuvumela ukuba wehle kwaye ekugqibeleni ikunike impazamo eyi-0, emva koko nge-redsn3.1.2w ndibeke u-3.1.3 kwakhona kulungile kodwa khange indinike mqondiso kwinkampani yam. , emva koko ndibeka isiko le-3.1.3 elenziwe ngekhephu kunye nokuqhekeka kwejele kusebenza ngokugqibeleleyo ngohlobo XNUMX.
Ukuba kukho umntu ofuna iinkcukacha ezithe kratya, ndixelele
Molo JK2002 NDINENGXAKI EFANAYO, NJENGOKO UFumene I-3.1.2, KANYE NJENGOKO UKUYIKHULULEKILE, NDINethemba lokuba uyakundinceda
Unokukhuphela i-Baseband kuphela ukuba unayo iBootloader 05.08.:
Kulungile, ndibeka uguqulelo 3.1.2 nge-itunes kuqala, (ngokucinezela isitshixo sokutshintsha kunye nokubuyisela, ivula i-Explorer ukuze ukhethe ifayile ye-ipsw), iyayifaka kodwa ekugqibeleni ikunika impazamo 1013 Ndicinga ukuba be, usuka kuye kwaye uphinde ufake uhlobo olufanayo kunye ne-redsnow kwaye sele iyifakile kakuhle kwaye i-iphone iyajika naleyo nguqulo.
UEdson Delgado sitsho
Molo, ndinayo i-iphone 3g enenguqulo 3.1.3, baseband 5.12.01, ndinayo ngokusemthethweni noTelcel eMexico, ndifuna ukwazi ukuba ndingayisebenzisa na ukuze ndibeke i-cidya kuyo?
Phendula uEdson Delgado
Ndine-iPod touch yesizukulwane se-8G 3 okokugqibela ndiyivuselele kwinguqulelo 3.1.3 kwaye ndifuna inguqulelo 3.1.2 ukuze umntu azi ukuba angabuyela njani kwinguqulo 3.1.2 ndiyakucela ukuba undixelele ukuba ndingayibeka njani pleaseee.
Kuyabonakala ukuba iApple yaphumelela edabini, ngaphezulu kwenyanga kwaye asinakho ngokuchasene nesiseko esingu-5.12.1, kuye kwafuneka ndithengise i-iPhone yam endala ye-3GB 16G kwaye kuye kwafuneka ndizibophe kwinkampani ukuze ndikwazi ukuthetha, kodwa kuyacaca ukuba Isiseko se-5.12.1 asinakuba nayo i-cydia. Ndithetha ukuthi, NIUN BRILLO… ..
HA HA HA HA HA UYA
Okokugqibela ukuba ...
Ndine-3G esemthethweni ye-iPhone, enenguqulo 3.1.3 ene-baseband 5.12.1 kwaye ndakwazi ukufaka i-cydia….
Kwaye isebenza njengekhubalo !!
molo .... andikwazi ukukhupha i-iphone kwimowudi ekhuselekileyo, ndizamile ukuseta kwakhona nayo yonke into kwaye akukho nto, ucebisa ntoni .... ngokubhekisele ...
Kwaye awazi ukuba ingasebenza nge-3G?
molo ndine-iphone ene-3.1.3 firware kunye ne-basebad 05.12.01 kunye ne-bootoader 6.4 movistar ndingayenza njani i-jaibrear ukufaka i-cydia
Pawer: kwii-3Gs ndiyenzile kodwa kufuneka ihlale ibhetri.
aciondc: Ndiyenzile nge-redsn0w0.9.4 ndiyenzile nge-mac
Lucas 1978 sitsho
Molo, kwiintsuku ezi-3 ezidlulileyo ndathenga i-iPod touch 3G MC ene-firmware 3.1.3 evela kumzi-mveliso, ndifuna ukuyaphula ejele kodwa ukuza kuthi ga ngoku andikaphumeleli kwanto, ndizamile ukwehlisa iinguqulelo ezahlukeneyo ze-iTunes kwaye ayinakuba njalo , Ndizamile ukusebenzisa i-blackra1n ngqo kwaye ayisebenzi, ndizamile nokubeka i-2G firmware kuyo, ukuba umntu unolwazi nceda undazise, ​​imeyile yam yile lucas1978@gmail.com. Ndiyabulela kakhulu !
Phendula uLucas 1978
Ndifana ne-aciondc ndine-3gs kwaye andifuni ukukhupha iphone, beka nje i-cydia ..
Ngaba kunokwenzeka ukuba uyenze nge-sn0wbreeze? .. Uxolo ukuba sele uyiphendulile le nto kodwa khange ndikwazi ukuyibona.
I-carlos: Ndiyenzile nge redsn0w0.9.4 Ndiyenzile nge-mac
Molo .. Ndinazo ii-3Gs ezine-baseband 05.12.01 kwaye ziqinile 3.1.3, ingaba ukhona umntu owenze i-jailbrake kwindawo yeefestile ??? Andinayo iMAC !! rhoxa ...
Kuyafundwa phaya ukuba unokwenza kuphela iJailbreak (Cydia) i-iPhone 3GS entsha nge-iBot entsha kunye no-3.1.3, kodwa kuphela kwi-MAC, ngaba ikhona inyani?
Isidenge david sitsho
· :) Ndisisidenge, ndinokuphinda ndisebenzise i-iphone
molo nje ngenxa yokufuna ukwazi (iberlin okanye nabani na) i-iPhone yam iyi-3gs kwaye andazi nokuba ndiyenze ntoni, ndicinga ukuba ndiyibuyisile kwaye ndafaka ingxelo engu-3.1.3 kodwa ke, besele bandixelele ukuba ndinayo into ekufuneka uyenzile kukulinda ufumane ifom ukuze uyilungise, umbuzo wam ngulo, ukuba ndiyamqinisekisa ukuba itouch emva kokhetho lokuyilungisa sele ikhona, ungabuyela kwimeko ye-iphone ??? Ndicela umntu ondincedayo !!! Ndilahlekile 🙁
Molo berlin Ndihlala ndilandela iitutorials zakho ndine-iphone 3g ekhuphe imitya yayo nge-redsnow isandla esisezantsi siyi-4.26.08 ene-firmware 3.0 kwaye ndifuna ukuyivuselela kuhlobo 3.1.2 ndisebenzise i-firmware yakho yesiko kwaye ndifumana impazamo engu-1604 kwi imo ye-dfu enomfanekiso q Ibonisa ukunxibelelana ne-itunes kwaye ke kufuneka ndibuyisele i-firmware 3.0 kwaye ndiyikhulule nge-redsnow ha kwaye ndine-pc ene-windons xp kunye ne-itunes 9.1… .. ndenze ntoni okanye ndenza ntoni … .enkosi
kuyamangalisa, kodwa kuyinyani, emva kwamanyathelo amaninzi alula (ukuba ayalandelwa ngokulandelelana njengoko kubonisiwe kwisifundo) ndiyifumene, i-iPhone 3G 8 gb inguqulelo 3.1.3 kunye nemowudi 05.12.01, ekugqibeleni yi-JAILBREAKEADO, qala ukhuphele i-redsn0w , emva koko ndilandele imiyalelo, ndiyiphumezile, NDIYIPHUMELELE
Enkosi ngesi sifundo singakholelekiyo, bendihlaziye ubuncinci ukuya kuguqulelo 3.1.3 kwi-iTunes, kwaye ibingafezekisi nto, de ndilandele eli nyathelo ngenyathelo.
Ndine-iphone 3g 8 giga, ene-firmware 3.1.3, kwaye isekwe kwi-0.5.12.01, nge-jailbreak kodwa khange ndiyenze, ingxaki kukuba yi-AT & T kwaye ndiyisebenzise nge-etenel kwaye ngoku ayisasebenzi njengeseli ifowuni.
Ndingayinika njani amandla kwakhona? Ukubulisa
uDaniel oller sitsho
Molweni UMBUZO WAM NGULE NDILANDELAYO NDIPHAWULELE IPHONE YAM 3G KUVERSION 3.1.3 (7E18) OKU KONKE KULUNGILE INGXAKI KUPHELA KUKUBA IBATTERI ISETYENZISWA NGAPHANTSI KWEYURE ezili-10 !!! NGABA NDIYIHLAWULELA NGE-USB NGE-PC NGOKU?
Phendula kuDaniel oller
Oko kungenxa yokuba itshaja inokuthi iphule kwaye ngoku awubeki iibatios ezifanayo
Molo… .FIRST NDIFUNA ENKOSINI NGABAgULAYO ​​EKUPHENDULENI NOKUNCEDA IZIJONGO NJENGAM….
ITYALA LAM NGU-SGTE… .. NDITHENGA I-3 GB IPHONE 32GS ENTEL CHILE… .FIRM 3.1.2 (7D11) MOD. IMOD133LZ YOKUQALA IMODI 05.11.07 ……
Ndagqitha iBlackRA1N KANYE neCYDIA YAMISELWA NDAYE NDAYA JAILBRAKEADO…. ENKULU… .UMANGALISO NGOKO XA NDAYICIMAYO… UMFANEKISO OCOLILEYO WEKHUSI LWE-USB UPHUMELELE KWI-ITUNES DISK ... NDOYIKILE NDILINDELE… KUDLULA UKUDLULA IBlackRA1 KUYE KWAKHONA YENZELWE KWENZIWA…. NDITHI: NDENZE I-JAILBRAKE YENZAKALA KAKUHLE NDIZOKUYIQINISEKISA KUSUKA KWI-0 KUNYE NOKUNGANIKEZELWA IBlackRAIN NE-CYDIA …… EMVA KOKUFUNA UKUBONA IIVIDIYO KWI-YOUTUBE NAMI NGEKE….
UMBUZO WAM… NDINGAFAKA NJANI UKUFAKA I-CYDIA UKUZE NDIKHUPHELELE UKUKHUTHAZA ISICWANGCISO SOKUSETYENZISWA KWE-PUSH OKANYE IGOSA LOKUGQIBELA… NDIFUNDILE UKUBA INOKUKHUTSHELWA KUPHELA KWI-CYDIA… ..
KUNYE NOMBUZO WAM WOKUGQIBELA: INGABA NDINAYO KANJANI LE NGXAKI CHATO… .UKUBA NDIPHAKAMISA KWI-ITUNES UKUYA KWI-VERSION 3.1.3 IMISEBENZI YE-IPHONE ISETYENZISWE KWAYE NDINGAQHUBEKA NDISEBENZA NOMSEBENZI WAM… NJENGOKO INYANISO INGINIKA IZINTO EZINYE IXAKEKILE KWAYE NDINGAFUNI ILIBERALRO NGOBA NDINESICWANGCISO SOKUFUMANEKA KWIMINYAKA EDLULEYO .. ..
NCEDA NCEDE ... NGENXA YOKUBA LULONA BABALO LUFONILE ...... MIBUZO
Xa ufumana impazamo eyi-1604, kuya kufuneka uhambe ngalo mzuzu IREB:
Ayifanelanga ukuba nefuthe kubume bomthwalo. Kuthekani ukuba iyahluka lixesha lokutshaja nge-USB ecothayo kunakwinethiwekhi.
Ukuba ubona ukuba ibhetri itsala ngokukhawuleza, zama ukubuyisela kwakhona.
Buyisela kwi-iTunes kwaye uya kuqhubeka ne-iPhone ngaphandle kweJailbreak
UBHEKELELA KWI-VERSION 3.1.3, NGOKUBA NDIZAMA UKUBUYISELA OKANYE NDINIKEZA NDINIKE INDLELA YOKUHLAZIYA KU-3.1.3
ANDIFUNI UKUHLALA NE-IPOD: p
Ukuba opharetha wakho yi-iPhone esemthethweni, akukho nto yenzekayo, hlaziya kwaye yiyo, iyakusebenza ngesiqhelo, kodwa awungekhe uyiphule okanye uyiyeke
ENKOSI MHLOBO WAM… .. KUKHANGELEKA UKUBA NDIM KUPHELA KWE-GIL OFUNA UKUHLAZIYA UKUYA KU-3.1.3… KODWA INYANISO MHLOBO WAM, KUFUNEKA USILWELE UKUZE UKWAZI UKUPHUMELELA IQELA, KUM AYIBONELELANGA, NDICINGA UKUBA NDIZA KUYITENGISA NDibuye NDIBUYELE NGE-WINDOWS MOBILE, NGAPHANDLE KOKUTHANDABUZA KUM NDIPHINDE NDIPHINDE NDIPHINDE NDIPHINDE NDIPHINDE KULULA UKUFAKA NOKUGQIBELA NOKUFAKA IIROM EZAHLUKILEYO….
Le web asiyiyo eyam, ndiyasebenzisana nje….
Ola berllin nceda ndifuna ingcebiso yakho ndine-iPhone 3G 16 gb inguqulelo 2.2 Ndifuna ukuvuselela 3.1.2 Ayinayo ne-cydia nayo. Ndiyathemba impendulo yam
Bonisana, ndine-iPhone 3GS 32 GB yokuba emva kwempazamo ebangelwe nguCyidia kuye kwafuneka ndiyibuyise kwaye ngempazamo ndishiyeke ku-3.1.3, ngokungathi oko akwanelanga andinayo ifayile yogcino eCydia. Akukho nto ndinokuyenza, akunjalo?
Ngaba ingumbandela wokulinda okanye isixhobo sam sishiyelwe inkunkuma? Kwimeko apho kuya kufuneka ulinde, unayo ingcamango yokuba uza kulinda ixesha elingakanani?
Molo, ndine-iphone 3g, i-16gb inguqulelo 3.0 ekhutshelwe ivodafon, kodwa ndenza kakubi kuba iifowuni zingangeni, ngakumbi xa kufakwa ipod, bandixelela ukuba kungenxa yenguqulo kufuneka ufake enye ephezulu, kodwa kwi-ituns kuphela kukho i-3.1.3, ndingayihlaziya kuloo nto okanye ucebise. Garcia kwaye uxolele ulwazi lwam oluncinci
molo 'umxholo wam yi-itunes esq ndihlaziye i-itunes 9.1 ukusukela ngoko i-blackra1n ayisebenzi kwaye ngalo lonke ixesha ndidibanisa iphone yam, izinto zonakele
Molo, ndingomnye wee-empanados ezinemodeli ye-iphone 3gs 32gb ye-MC eyaphulwe kwaye ikhutshwe (ndivela kwivodafone) ndiqalise ukudibanisa kwaye ndifake iinkqubo ezingenakubalwa, de kube kukudinwa kwam, kuvaliwe kwaye emva kokundifunda Iiforamu ezinkulu kakhulu bendingenandlela yimbi ngaphandle kokuyibuyisela kwimo yoqobo engu-3.1.3 Ngokucacileyo ndiphulukene nejele kunye nokukhululwa kwaye ngoku ndicinga ukuba ibaseband izakuhlaziya, kodwa ke andinayo imistist sim kwaye andikwazi uyiqale. Ngaba ingaqalwa ngandlela thile? Kwaye, ngaphezu kwako konke, ndibone iindawo ezininzi ezithi i-3.1.3 inokukhutshwa yi-imei ngaphandle kwengxaki, ngaba yinyani le? Ukuba ndingayikhupha nge-imei, andikhathali nokuba yi-jailbrek. Ndiyabulisa ...
Ndinenguqulo 3.1.3 kunye nesiseko 5.12.01, kuba iphone intsha.
Ngaba ndinokuthotywa? I-EX: 3.1.2 kunye nesiseko esezantsi.
Ndiyabulela ngezimvo zakho.
BERLLIN MHLOBO WAM NDIYAKUBULISA PHAKATHI KWELIZWE ECUADOR NDINOMNXEBA IPHONE 3.1.3 (7E18) NGOKUQINISEKILEYO 05.12.01 NDIFUNA UKUYIJONGA KODWA ANDIZI UKUBA NDINGENZA KANJANI KE NDIZAMA IINDLELA EZININZI NDINESIPHOSO XA NDITSHINTSHA UKUBA 3.1.2 INYATHELO AYIQapheli UKUBA IKHADI LAM ISIMI OKANYE INKONZO YAM I-INTERNET YOMSEBENZI NDINCEDA NDITHATHE AMANYATHELO OKULUNGISA KUNYE NEZINXIBELELWANO EZILUNGILEYO UKUZE NDIBALELE IFONI YAM LE YI-IMEYILE YAM NGOKUBA UFUNA UKUYENZA QHAGAMSHELANA elgitanodeecuador@hotmail.com okanye UKUBA KUKHO UMNTU ONGANDINIKA UNCEDO OLUPHELELEYO LOKUBA NOMBULELO KWANGAPHAMBILI
Molweni, ndifumene iphone ehotele umntu akazobuyela eArgentina, waya eSpain. Ndifuna ukuyivula kodwa andazi ukuba ndisebenzise ntoni. I-iphone emnyama ye-16gb ithi imodeli MB759Y inguqulelo 3.1.3 (7E18) ingavulwa? Andazi ukuba yi-3G okanye i-3G eqhelekileyo. Ndikhokele nceda. Enkosi
imeyile yam yile matiasonboard@gmail.com
Ngaphandle kweenjongo zokuziphatha kakuhle kukaMatías, kodwa njengokuba uxelelwe ukuba umnini wale Iphone akazukubuyela eArgentina, ungafumanisa ukuba ungayifumana njani kuye (zininzi iindlela zokwenza oko). Ukuba ndilahlekelwe yi-iPhone yam ndingavuya kakhulu ukuba bangayibuyisela kum, kodwa kunjalo kuyalinga kakhulu kwabanye ukugcina oko kungaphandle. Ukuba uhlala nayo, kuya kufuneka uyazi ukuba ngokuqinisekileyo njengefowuni ayizukusebenzela (iya kuvalwa) kwaye kwiimeko ezintle uyakonwabela izinto ezintle ezingezizo ezakho neziza kuphuma ecaleni Ngokuchasene noko, ukuba uyithumela kumniniyo, uyakonwabela ulwaneliseko lobuqu lokonwabisa umntu, ukunyaniseka akupheli ixabiso. Ndiyaxolisa ngokugqiba ekubeni ndiziphathe kakuhle, kodwa kulihlazo ukubona eli hlabathi linemithi embalwa kwaye embalwa kwaye ngokungathandabuzekiyo yonke imihla ifana ne-p… jungle.
Molweni, nindixolele, kodwa ndimfowunele wandixelela ukuba akukho ngxaki ngoba ivela kwinkampani kwaye ndiyigcinile kuba sele bemnikile enye. Ndinobucayi bokuzama kodwa ukuba andikwazi ukuyivula ndiza kuyisebenzisa njenge-ipod, ukuba uphendula umbuzo ndizokubulela okoko ndiphendule eyakho. Andinakuze ndiyithenge enye kuba iselfowuni yam kukuthetha nokuthumela imiyalezo, ukuba bayishiya kum okanye inkampani yam indinike yona, ndivuya. Ndilinde impendulo
Molo eBerlin okanye ngubani onokundinceda, ndiye kuwo onke amagqabantshintshi akweli phepha nakwamanye amaphepha amaninzi kwaye ayicacanga kum, bendiyilinganisile i-iPhone kodwa ngempazamo ndihlaziye i-firmware ukuba ibe ngu-3.1.3, i-iPhone yam I-3gs 16gb baseband 5.12.1 kunye ne-iboot 359.3, andikhumbuli ndenze i-backup kwi-cydia kodwa ndenza kwisicelo se-PKGBACKUP. Umbuzo wam kukuba ndingaphinda ndenze i-jalibreack kwakhona
Molo Berllin, ndinombuzo omkhulu !! Umhlobo waya eUnited States (Denver) ndaza ndamcela i-iPhone 3GS entsha ye-16GB. Ndicinga ukuba intsha kraca ine-firmware 3.1.3 kunye ne-baseband entsha.
Ngokusuka koku ndikufundileyo, nokuba i-jailbrake kunye nokuvula akunakwenziwa, ke andizukuyisebenzisa noMoviestar okanye uTelcel eMexico. okanye ndingathanda uku-odola umhlobo wam ikhamera? Ngokunyaniseka, bendonwabile malunga ne-iPhone entsha kwaye ngoku ndiziva ndibuhlungu kuba ndingakwazi ukuyisebenzisa. Ndiyabonga ngento yonke. Ihagi
Molo berllin Ndiyabona ukuba uyingcali kule nto ndiyifunde apha, kulungile ndiza kukuxelela ngetyala lam ndithenge i-iphone 3gs 32 gb ine-baseban 5.11.07 kunye ne-3.1.2 ibhokisi ine-serial 88945 I cinga ukuba ibhuthi intsha bendiyisebenzisa ndedwa Ngenye imini bendifakelwe i-cydia kwaye ibisimahla kuzo zonke iinkampani kwaye zilungile, indlela ekubi ngayo ukuba kwenzeke ukuba kufuneka ndiyiqale ngokutsha ukuvavanya kwaye poof yahlala kwikhebula le-usb kunye ne-itunes, Andazi ukuba iphulwe yijele, uyazi kakhulu Ucebisa ukuba ndenze ntoni ukuze ndiyisebenzise kwakhona ngaphambi kokuba ndibene-3g ye-16 endiyihambisileyo njengenxalenye yentlawulo bendinayo i-3.1.2 kunye ne-5.11.07. konke kugqibelele kodwa andazi, okona kubi kakhulu ndiyazi ukuba ndiyithengile, andikwazi ukuyifumana ukuze ndibuze ulwazi oluthe kratya, ndiyithenge kwi-Intanethi kwaye ndineselfowuni, ndiyakucela ukuba undinike isandla, Ndiza kukupha
Ngaba iya kuba ndim ndedwa umntu ohlaziya i-iphone iye ku-3.1.3 ukusuka ku-3.1.2 kwaye ndifake i-baseband yakutshanje eyi-05.12.01 yokuphulukana ne-baseband yangaphambili ye-05.11.07?
Ngexesha elithile indlela yokwehlisa ibasband okanye ukuqhekeka kwejele kwe-3.1.3 esele ifakiwe kwi-itunes iya kuphuma! ¡! ¡!!
Ndine-3gb iphone 32gs
Molweni zihlobo, inyani yile, andazi kangako malunga nokuqhekeka kwejele kodwa ndiyakwazi ukusebenzisa i-iPhone yam njenge-ipod, bandithumelele i-iPhone evela e-United States kodwa kwinkampani ye-AT & T kwaye ndifuna ukuyisebenzisa eMexico, ngokwe I-geohot, i-iPhone 4 sele ikhuphe i-jailbreak yayo iphone 3gs 3.1.3 7e18 igcwalisa i-5.12.01? Kodwa andazi ukuba sele iphumile okanye ukhona umntu osele ekhupha le iPhone?
Ngaba umntu unokundinceda ??????
Molo, i-iPhone 3G yam yinguqulelo 3.1.3 enememori eyi-8g, inethiwekhi icacile kwaye andazi ukuba ndiyifaka njani i-cibian, ndibhala ndisuka ePeru, imeyile yam yile ygarme@gmail.com Igama lam ndinguYovana, enkosi ngempendulo.
Molo eBerlin… okokuqala enkosi ngokunika ixesha lokuphendula okoko ndibone phantse ukuba akukho mpendulo ibhlog; Ndine-iphone 3g ene-firm 2.1, ndiyithengile eMovistar inecebo, bendiyivulile, ndifuna ukuvuselela ifemu, ucebisa eyiphi? Ngenxa yokuba uninzi lwezicelo zingasebenzi, ndizibonile iitutorials ezininzi kwaye sele ndiyazi indlela yokuhlaziya, ukusuka kwinto endiyibonileyo kuya kufuneka ndisebenzise ifirm 3.1.2 okanye 3.1.3 isiko eliqinileyo lenombolo zomthetho ezisemthethweni, ngeTunes 9; kodwa ayikacaci kum into endiyenzayo emva kwexesha, kuba iphone yam ikhutshwe kunye ne-2.1 kwaye ine-cydia…. kwaye kwinto endiyifundileyo abaninzi xa besenza isenzo baphulukana ne-wifi okanye i-sim khadi ayibazi… kwangaphambili enkosi ngoncedo lwakho ... imibuliso evela embindini wehlabathi i-ecuador
Phendula u CHARLY
Molo, wenza njani? Ndine-iPhone 3g 16gb, andazi ukuba kwenzeke ntoni, ibonisa kuphela i-icon ye-iTunes kunye nentambo ye-usb kwiscreen kwaye xa ndiyidibanisa ne-iTunes indicela ukuba ndibuyisele kwaye ndifakele Inguqulelo yesoftware 3.1.3 kodwa kubonakala kum ukuba ayizukuvulwa kwaye ikhutshwe andithandi ukuba nayo njenge-ipod, umntu owaziyo ukuba inokukhutshwa njani emva kokufaka le software okanye enye indlela faka enye inguqulelo endala apho ifowuni inokukhutshwa khona, enkosi kakhulu kwimibuliso yangaphambi kuka-Alexis
!!!!!!!!!!!!! engxamisekileyo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ndine-iphone ye-8gb, ndiyayihlaziya ibe ngu-3.1.3 nge-itune, xa ndiyicima ndiyilayita, ndifumana umfanekiso wentambo ye-usb enotolo oluya phezulu kunye ne-itune dico; Ndidibanisa i-iPhone yam ne-itune kwaye akukho nto yenzekayo, isafana, andazi ukuba ndenzeni ...
Bayakuba nobubele kwaye bayandinceda kwaye bandinike isandla esincinci, ukuze ndenze njalo ukuze sisebenze ngokwesiqhelo….
moloaaaaaaaa, ndifuna ngokungxamisekileyo uncedo oluncinci
Ndiyifakile itunes and it told me to update, ndiyenze xa ndibona iphone ndifumene ukuba sim simakiwe
Andazi ndithini!!!!!!!! ndincede kwi fis
Nceda!!!! I-iPhone 3GS yam, i-16GB i-Firmaware 3.1.3, i-Jail eyaphukileyo iyayiqala kwakhona okanye iyivale ngaphandle kwesizathu ke ndifuna ukuyibuyisela kwaye ndiyenze yonke inkqubo yokubuyisela kunye neJailbreak elandelayo kwakhona, ndisebenzise ithuba lokuba ndiyise kwiFirmware version 4xxx Ndingayenza njani yonke le nto, enkosi kakhulu
kakhulu! into embi ukuba megaupload ayisekho -.-
Impendulo ku -.-